Malunga nathi - i-Huaian Huafu Special Casting Nylon Co, Ltd.
I-H & F · INYULO
I-Huaian Huafu Special Casting Nylon Co, ltd, eyasekwa ngo-2007, ebekwe e-huai'an, idolophu yenkulumbuso yokuqala yase-China, i-zhou en lai ikhethekile ekuveliseni iimveliso ezahlukeneyo ze-nylon kubandakanya i-pulley, i-Slider, iGiya, iRoller, imikhono , ilifti pulley, isikhokelo sentambo nazo zonke iintlobo zamalungu enayiloni akheke ngokukodwa kunye nezixhobo.
IHuafu ikakhulu ivelisa iimveliso ezahlukeneyo zenayiloni kubandakanya iipleyiloni zenayiloni, isikhokelo sentambo yenayiloni, izixhobo zenylon, igasket yenayiloni, ibha yenayiloni, isilayida esityibilikisayo, iroli yenylon kunye nezahlulo ezahlukeneyo zenylon ezimile. Ngexesha elingaphezulu kweminyaka elishumi yokuphuhliswa, uHuafu ukhule waba ngomnye wabathengisi abaphezulu beemveliso zenylon enabasebenzi abangaphezu kwekhulu kubandakanywa iinjineli ezilishumi elinesibhozo nangaphezulu kwexabiso lemveliso lonyaka lezigidi ezilishumi zeedola zaseMelika.
Oko sinokunikela ngako
◉: Uninzi lwamaxabiso okhuphiswano
◉: Unikezelo oda ekhawulezayo
◉: Inkqubo yokulandelela esemgangathweni
◉Imveliso yenayiloni eyenziwe ngokwezifiso
◉: Iiyure ezingama-24 zenkonzo yokulinda
◉: ingcali iqela lobugcisa
Ibango leemveliso zeNylon lonyuka kakhulu Njengophuhliso loqoqosho lwehlabathi kula mashumi eminyaka akutshanje. Iimveliso zenayiloni, njengezinto ezingenakubekwa endaweni yeklabhu yeemveliso zeplastiki, zisetyenziswe ngokubanzi kwindawo yobunjineli ngenxa yokufaneleka kwayo.
Iipulley ze-nylon zisetyenzisiwe kwisinyusi sengxolo yazo ephantsi, ukuzithambisa ngokwakho, ukukhusela i-wirerope kunye nokwandisa ubomi benkonzo yazo zonke izixhobo.
Iimveliso zenylon zisetyenziswa kwikreni njenge pulley, isikhombisi sentambo ukunciphisa ukungqubana kunye nokunciphisa ubunzima bomatshini, kunye noomatshini abasebenza ngenayiloni banokusetyenziselwa kwizibuko apho imeko yokusebenza okufumileyo kuhlala kwenzeka.
I-crane yenqaba idlala indima ebalulekileyo kulwakhiwo lwasezidolophini, kwaye izindlu nomhlaba zigubungela ngaphezulu kwe-10% yoqoqosho lwehlabathi. Iiplastikhi zenayiloni zizinto ezingenakubekwa endaweni yenkqubo yemveliso yecrane kwaye zinokuthwala phantse ubungakanani obulinganayo xa kuthelekiswa neeplleys zentsimbi.
Xa kuthelekiswa ne-gasket yesinyithi, i-nylon gasket ine-insulation efanelekileyo, ukumelana nokubola, ukufudumeza ubushushu, iipropathi ezingezozobuchwephesha, ubunzima bokukhanya. Ke isetyenziswa ngokubanzi kwi-semiconductor, imoto, ishishini le-aerospace, ukuhombisa ngaphakathi kunye nezinye iinkalo ezinxulumene noko.
Ngaphezulu kwayo yonke le nto, njengoko ixesha lihamba, iimveliso ezingaphezulu zenylon ziya kuveliswa kwaye zisetyenziswe kwiindawo ezininzi. Ukulunga kwayo, iinxalenye zeyiloni ngokuthe ngcembe zibuyisela iinxalenye zesinyithi. Kwaye le yindlela kwaye ikwaluncedo kuphuhliso lwendalo. Ndiyathemba ukuba abathengi bethu banokunxibelelana nathi, uHuafu Nylon`ukuhlangabezana neemfuno zemveliso yenayiloni. Sikunye sandisa ishishini lethu, ukuseka ubudlelwane intsebenziswano ezinzileyo.